धमाधम नियुक्ति खारेज गर्दै सरकार
सेरोफेरो ७ जेठ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदले यसअघिका सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीलाई धमाधम बर्खास्त गर्दैछ । बर्खास्त गर्ने मनसाय राखी काम चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । उनले दिएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै सरकारले २४ घण्टाभित्र…
'पीसीओएस' समस्याले बाँझोपन निम्त्याउन सक्छ - प्रा. डा. वैद्य
७ जेठ, काठमाडौं । पीसीओएस के हो ? यसले के गर्छ ? पीसीओएस महिलालाई हुने समस्या हो । जसलाई पोलिसाइटिक ओभरी सिन्ड्रोम भनिन्छ । वास्तविक कारण थाहा नभए पनि यसका समस्या संग विभिन्न तत्वहरु सम्बन्धित हुन्छन् । यी तत्वहरु अन्तर्गत इन्सुलिनको प्रतिरोध गर्ने,…
वीरेन्द्रनगरको अन्तिम मतपरिणाम : मेयरमा काँग्रेसका देवकुमार सुवेदी, उपमेयरमा एमालेकी मोहनमाया म्यान अफ दि इलेक्सन
सेरोफेरो६ जेठ, सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको अन्तिम मतपरिणाम शनिबार सार्वजनिक भएको छ । नेपाली काँग्रेसका देवकुमार सुवेदीले १४ हजार चार सय पाँच मत पाई मेयर पदमा विजयी भएका छन् । उनका प्रतिष्पर्धी नेकपा एमालेका बालाराम शर्माले १३ हजार आठ सय ९९ मत र नेकपा…
वीनपा १५ मा नेकपा एमालेको प्यानल विजयी
सेरोफेरो६ जेठ, सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर १५ मा नेकपा एमालेका पुनबहादुर पुलामीको प्यानल विजयी भएको छ । पुलामीले तीन सय ९९ मत पाएका थिए भने उनका प्रतिष्पर्धी नेपाली काँग्रेसका रुद्रबहादुर खत्रीले तीन सय ४२ मत प्राप्त गरेका थिए । नेकपा माओवादी…
भक्तपुर नेमकिपाको लालकिल्ला
सेरोफेरो६ जेठ, काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भक्तपुर नगरपालिकालाई आफ्नो पोल्टामा पारेको छ । राजधानी काठमाडौंसंग जोडिएको उक्त नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर, १० वडाका अध्यक्ष र ५० सदस्यसहित उसले एकलौटी जित हासिल गरेको हो । नेमकिपाका महासचिव समेत रहेका…
वीनपा ११ एमालेको पोल्टामा
सेरोफेरो५ जेठ, सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ११ को अध्यक्षमा नेकपा एमालेका नन्दलाल शर्माको प्यानल निर्वाचित भएको छ । शर्माले एक हजार चार सय ५६ मत प्राप्त गरी वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । उनका प्रतिष्पर्धी नेपाली काँग्रेसका कुलबहादुर खत्रीले एक हजार…
चौकुने गाउँपालिकामा एमाले विजयी
सेरोफेरो ५ जेठ, सुर्खेत । चौकुने गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका धिरबहादुर शाही निर्वाचित भएका छन् । उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका खड्क बास्पानेलाई चार सय ९७ मत अन्तरले पराजित गरेका छन् । शाहीले तीन हजार दुई सय ४२ मत प्राप्त गरी अध्यक्ष…
पञ्चपुरीमा काँग्रेस विजयी
सेरोफेरो ५ जेठ, सुर्खेत । पञ्चपुरी नगरपालिकाको मेयर पदमा नेपाली काँग्रेसका उपेन्द्रकुमार थापा निर्वाचित भएका छन् । उनले नेकपा एमालेका मान बहादुर विकलाई चार सय दुई मत अन्तरले पराजित गरेका हुन् । थापा नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका पूर्व सभापति हुन् । तत्कालिन सभापति…
माटोमा मिसाइएको पौरख !
सेरोफेरो५ जेठ, सुर्खेत । स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार बैशाख ३१ गते तीन प्रदेशका ३४ जिल्लामा मतदान सम्पन्न भएको छ । उक्त मतदानमा स्वतःस्फूर्त भाग लिएर नेपाली जनताले तोकतन्त्रप्रतिको अगाढ आस्था प्रकट गरेका छन् । यद्धपी मतपरिणाम आउने क्रम आजसम्म पनि…
टीकापुर घटनाका दोषीलाइ माफी
सेरोफेरो ४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले टीकापुर घटनाका दोषीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई लिएर २०७२ भदौमा टीकापुरमा विभत्स घटना भएको थियो । थरुहट र अखण्ड सूदुरपश्चिम आन्दोलनका पक्षधरहरुबीच…